Google Assistant ပါဝင်တဲ့ အကောင်းဆုံး စမတ်စပီကာ (၇) မျိုး – Internet Journal |
Google Assistant ပါဝင်တဲ့ အကောင်းဆုံး စမတ်စပီကာ (၇) မျိုး
Mar 12, 2018Comments Off on Google Assistant ပါဝင်တဲ့ အကောင်းဆုံး စမတ်စပီကာ (၇) မျိုး0257
Google ရဲ့ virtual personal assistant ဖြစ်တဲ့ Google Assistant ဟာ ပြိုင်ဘက်တွေထက် ပိုမိုချောမွေ့တဲ့ interaction တွေကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီ virtual assistant ဟာ အချိန်နဲ့အမျှ ပိုမိုကောင်းမွန်လာသလို လေ့လာမှုတွေကိုလည်း အဆက်မပြတ် ပြုလုပ်နေပါတယ်။
Google Assistant ပါဝင်တဲ့ စပီကာတွေမှာ လုပ်ဆောင်ချက်အပြည့်အဝ ပြုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက် Wi-Fi ချိတ်ဆက်မှု လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း လိုအပ်တဲ့အခါမှာ Bluetooth ကနေတစ်ဆင့် နှစ်သက်ရာ မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်နဲ့ ချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် Google Assistant စနစ်ပါဝင်တဲ့ အကောင်းဆုံး စမတ်စပီကာတွေကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
(၁) Google Home Max Smart Speaker
Google Home Max ဟာ Google Assistant ပါဝင်တဲ့ အကောင်းဆုံးစမတ်စပီကာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ စတိုင်ကျလှပပြီး ဘက်စုံအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အသံအရည်အသွေးကလည်း ပြိုင်ဘက်တွေထက် ပိုကောင်းပါတယ်။
၄.၅ လက်မ woofer နှစ်ခုနဲ့ ၀.၇ လက်မ tweeter နှစ်ခု ပါဝင်တဲ့အတွက် ဟန်ချက်ညီတဲ့ အသံအတွေ့အကြုံကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။ Quad-core processor နဲ့ built-in microphone ခြောက်ခုကို အသုံးပြုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်း ဖွင့်ထားတဲ့ အကြောင်းအရာအတွက် အကောင်းဆုံး အသံအတွေ့အကြုံကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဈေးသက်သာတဲ့ Google Home Mini ဟာ Amazon Echo Dot အစား ရွေးချယ်နိုင်တဲ့ ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ လက်ဝါးအရွယ်သာရှိတဲ့ စပီကာရဲ့ဒီဇိုင်းဟာ လှပပြီး အပြင်ဘက်မှာ အထည်နဲ့ ဖုံးအုပ်ထားပါတယ်။
Home Mini မှာ ၄၀ မီလီမီတာ စပီကာတစ်ခုပဲ ပါဝင်တာကြောင့် အရည်အသွေးမြင့်မားတဲ့ အသံကို ရရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် Home Mini ကို ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ Google Assistant ကို အသုံးပြုနိုင်အောင် ရည်ရွယ်ဖန်တီးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
3. Sony LF-S50G Smart Speaker
Sony LF-S50G စမတ်စပီကာမှာ built-in ဒီဂျစ်တယ်နာရီ ပါဝင်ပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ 360-degree အသံအရည်အသွေးကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။ Chromecast နဲ့ multiroom audio အထောက်အပံ့အပြင် တစ်ချက်ထိရုံနဲ့ မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်တွေကို ချိတ်ဆက်ပေးမယ့် Bluetooth connectivity with NFC တို့လည်း ပါဝင်လာပါတယ်။
စပီကာရဲ့ကိုယ်ထည်က ရေစင်တဲ့ဒဏ်ကိုခံနိုင်ပြီး လိုအပ်တဲ့အခါမှာ အပြင်ဘက်က ကာဗာကို ဖြုတ်ပြီးဆေးနိုင်ပါတယ်။
4. JBL Link 20 Smart Speaker
JBL Link 20 ဟာ Google Assistant ပါဝင်တဲ့ ရေစိုခံစပီကာတွေထဲမှာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ကျစ်လျစ်ပြီး အကြမ်းဒဏ်ခံနိုင်တဲ့ ကိုယ်ထည်ကို ခိုင်ခံ့တဲ့အထည်နဲ့ ဖုံးအုပ်ထားပါတယ်။
JBL ရဲ့ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် bass သံကို ပိုကြိုက်သူတွေကတော့ နှစ်သက်ကြမှာပါ။ ဘက်ထရီအနေနဲ့ သုံးတဲ့အခါမှာတော့ ၁၀ နာရီကြာ အသုံးပြုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
Google Home စမတ်စပီမှာတော့ စတိုင်ကျလှပပြီး စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်တဲ့ ဒီဇိုင်းတစ်ခု ပါဝင်ပါတယ်။ သုံးစွဲသူအနေနဲ့ စပီကာမှာ မတူညီတဲ့အရောင်တွေ၊ အထည်စတွေကို ပြောင်းလဲတပ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။
Audio driver နှစ်ခုနဲ့ passive radiator နှစ်ခု ပါဝင်တာကြောင့် ကောင်းမွန်တဲ့အသံအရည်အသွေးကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။ Voice recognition ကလည်း အလွန်ကောင်းမွန်ပါတယ်။ အခြားသော Google စပီကာတွေလိုပဲ Home ကို အသံရော လက်အမူအရာတွေနဲ့ပါ ထိန်းချုပ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
6. JBL Link 300 Smart Speaker
အားပြင်းတဲ့ Bass သံကို နှစ်သက်သူတွေအတွက် JBL Link 300 စမတ်စပီကာရှိပါတယ်။ ကြီးမားတဲ့ ၃.၅ လက်မ woofer တစ်ခုနဲ့ ၂၀ မီလီမီတာ tweeter တစ်ခု ပါဝင်ပါတယ်။ အနက်နဲ့ အဖြူဆိုပြီး အရောင်နှစ်မျိုးနဲ့ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
7. Insignia Voice Smart Speaker
Insignia ရဲ့ Voice စမတ်စပီကာ LED alarm နာရီတစ်ခု ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကိုယ့်တည်နေရာရဲ့ လက်ရှိအပူချိန်ကိုလည်း ပြသပေးနိုင်ပါတယ်။ အသံအရည်အသွေးက စိတ်ကျေနပ်ဖွယ်ရာကောင်းပါတယ်။ အနက်နဲ့ မီးခိုးဆိုပြီး အရောင်နှစ်မျိုးနဲ့ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Google Assistant ပါဝငျတဲ့ အကောငျးဆုံး စမတျစပီကာ (၇) မြိုး
Google ရဲ့ virtual personal assistant ဖွဈတဲ့ Google Assistant ဟာ ပွိုငျဘကျတှထေကျ ပိုမိုခြောမှတေဲ့ interaction တှကေို ထောကျပံ့ပေးနိုငျပါတယျ။ ဒီ virtual assistant ဟာ အခြိနျနဲ့အမြှ ပိုမိုကောငျးမှနျလာသလို လလေ့ာမှုတှကေိုလညျး အဆကျမပွတျ ပွုလုပျနပေါတယျ။
Google Assistant ပါဝငျတဲ့ စပီကာတှမှော လုပျဆောငျခကျြအပွညျ့အဝ ပွုလုပျနိုငျဖို့အတှကျ Wi-Fi ခြိတျဆကျမှု လိုအပျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့လညျး လိုအပျတဲ့အခါမှာ Bluetooth ကနတေဈဆငျ့ နှဈသကျရာ မိုဘိုငျးထုတျကုနျနဲ့ ခြိတျဆကျနိုငျပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ Google Assistant စနဈပါဝငျတဲ့ အကောငျးဆုံး စမတျစပီကာတှကေို ဖျောပွလိုကျပါတယျ။
Google Home Max ဟာ Google Assistant ပါဝငျတဲ့ အကောငျးဆုံးစမတျစပီကာတဈခု ဖွဈပါတယျ။ စတိုငျကလြှပပွီး ဘကျစုံအသုံးပွုနိုငျပါတယျ။ အသံအရညျအသှေးကလညျး ပွိုငျဘကျတှထေကျ ပိုကောငျးပါတယျ။
၄.၅ လကျမ woofer နှဈခုနဲ့ ၀.၇ လကျမ tweeter နှဈခု ပါဝငျတဲ့အတှကျ ဟနျခကျြညီတဲ့ အသံအတှအေ့ကွုံကို ရရှိနိုငျပါတယျ။ Quad-core processor နဲ့ built-in microphone ခွောကျခုကို အသုံးပွုထားတဲ့အတှကျကွောငျ့လညျး ဖှငျ့ထားတဲ့ အကွောငျးအရာအတှကျ အကောငျးဆုံး အသံအတှအေ့ကွုံကို ထောကျပံ့ပေးနိုငျပါလိမျ့မယျ။
စြေးသကျသာတဲ့ Google Home Mini ဟာ Amazon Echo Dot အစား ရှေးခယျြနိုငျတဲ့ ထုတျကုနျတဈခုဖွဈပါတယျ။ လကျဝါးအရှယျသာရှိတဲ့ စပီကာရဲ့ဒီဇိုငျးဟာ လှပပွီး အပွငျဘကျမှာ အထညျနဲ့ ဖုံးအုပျထားပါတယျ။
Home Mini မှာ ၄၀ မီလီမီတာ စပီကာတဈခုပဲ ပါဝငျတာကွောငျ့ အရညျအသှေးမွငျ့မားတဲ့ အသံကို ရရှိနိုငျမှာမဟုတျပါဘူး။ ဒါ့အပွငျ Home Mini ကို စြေးသကျသကျသာသာနဲ့ Google Assistant ကို အသုံးပွုနိုငျအောငျ ရညျရှယျဖနျတီးထားတာ ဖွဈပါတယျ။
Sony LF-S50G စမတျစပီကာမှာ built-in ဒီဂဈြတယျနာရီ ပါဝငျပွီး ကောငျးမှနျတဲ့ 360-degree အသံအရညျအသှေးကို ထောကျပံ့ပေးနိုငျပါတယျ။ Chromecast နဲ့ multiroom audio အထောကျအပံ့အပွငျ တဈခကျြထိရုံနဲ့ မိုဘိုငျးထုတျကုနျတှကေို ခြိတျဆကျပေးမယျ့ Bluetooth connectivity with NFC တို့လညျး ပါဝငျလာပါတယျ။
စပီကာရဲ့ကိုယျထညျက ရစေငျတဲ့ဒဏျကိုခံနိုငျပွီး လိုအပျတဲ့အခါမှာ အပွငျဘကျက ကာဗာကို ဖွုတျပွီးဆေးနိုငျပါတယျ။
JBL Link 20 ဟာ Google Assistant ပါဝငျတဲ့ ရစေိုခံစပီကာတှထေဲမှာ အကောငျးဆုံးဖွဈပါတယျ။ ကဈြလဈြပွီး အကွမျးဒဏျခံနိုငျတဲ့ ကိုယျထညျကို ခိုငျခံ့တဲ့အထညျနဲ့ ဖုံးအုပျထားပါတယျ။
JBL ရဲ့ထုတျကုနျတဈခုဖွဈတာကွောငျ့ bass သံကို ပိုကွိုကျသူတှကေတော့ နှဈသကျကွမှာပါ။ ဘကျထရီအနနေဲ့ သုံးတဲ့အခါမှာတော့ ၁၀ နာရီကွာ အသုံးပွုနိုငျပါလိမျ့မယျ။
Google Home စမတျစပီမှာတော့ စတိုငျကလြှပပွီး စိတျကွိုကျပွငျဆငျနိုငျတဲ့ ဒီဇိုငျးတဈခု ပါဝငျပါတယျ။ သုံးစှဲသူအနနေဲ့ စပီကာမှာ မတူညီတဲ့အရောငျတှေ၊ အထညျစတှကေို ပွောငျးလဲတပျဆငျနိုငျပါတယျ။
Audio driver နှဈခုနဲ့ passive radiator နှဈခု ပါဝငျတာကွောငျ့ ကောငျးမှနျတဲ့အသံအရညျအသှေးကို ထောကျပံ့ပေးနိုငျပါတယျ။ Voice recognition ကလညျး အလှနျကောငျးမှနျပါတယျ။ အခွားသော Google စပီကာတှလေိုပဲ Home ကို အသံရော လကျအမူအရာတှနေဲ့ပါ ထိနျးခြုပျအသုံးပွုနိုငျပါတယျ။
အားပွငျးတဲ့ Bass သံကို နှဈသကျသူတှအေတှကျ JBL Link 300 စမတျစပီကာရှိပါတယျ။ ကွီးမားတဲ့ ၃.၅ လကျမ woofer တဈခုနဲ့ ၂၀ မီလီမီတာ tweeter တဈခု ပါဝငျပါတယျ။ အနကျနဲ့ အဖွူဆိုပွီး အရောငျနှဈမြိုးနဲ့ ရရှိနိုငျပါတယျ။
Insignia ရဲ့ Voice စမတျစပီကာ LED alarm နာရီတဈခု ပါဝငျပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ကိုယျ့တညျနရောရဲ့ လကျရှိအပူခြိနျကိုလညျး ပွသပေးနိုငျပါတယျ။ အသံအရညျအသှေးက စိတျကနြေပျဖှယျရာကောငျးပါတယျ။ အနကျနဲ့ မီးခိုးဆိုပွီး အရောငျနှဈမြိုးနဲ့ ရရှိနိုငျပါတယျ။
Previous PostF7 “Selfie Expert” စမတ်ဖုန်းသစ်ကို အမြည်းချပြလိုက်တဲ့ Oppo
Next PostICT Industry Development Workshop ကျင်းပမည်